Wikileaks oo Fashiliyey Qorshe Halis ah oo Kenya ka damacsaneyd Soomaaliya – Xeernews24
Wikileaks oo Fashiliyey Qorshe Halis ah oo Kenya ka damacsaneyd Soomaaliya
Website-ka Siraha faafiya ee Wikileaks,ayaa soo bandhigay dukumiinti muujinaya in Kenya ay dooneysay ka hor 2010kii in ay sameyso maamul iyada gacan saar la leh oo lagu magacaabayo Jubbaland kana jira koofurta Soomaaliya, kaas oo u suura gelinaya in ay Ciidan geliso Soomaaliya.
Weibsite-ka waxaa uu xusay in Madaxweynihii hore ee Kenya , Mwai Kibaki,Ra’isalwasaarihii hore Raila Odinga,iyo Wasiirkii hore ee Gaanshaandhigga Yuusuf Xaaji ay la kulmeen caawiyihii Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka Alexander Vershbow,si ay uga codsadaan in Kenya ay ku lug yeelato xasilinta Soomaaliya iyada oo u mareysa maamul iyada taabacsan oo ka dhisma Kismaayo,iyadana ay Ciidankeeda u geyso Soomaaliya.
Kulanka oo dhacay January 26keedaii Sanadkii 2010ka,ayey Saraakiish Madaxda Kenyaanka ah kaga codsadeen Dowladda Mareykanka in ay taageerto hindisaha Kenya waxaa ay Xilligaas tababartay Ciidamo badan oo Soomaali ah oo ay u diyarisay Dowladdii ku meel gaarka ahayd sida ay waxbixinta xuseyso hayeeshee ciidankaas ma noqon kuwa ku biira dowladda Soomaaliya ciidamadeeda.
Raila,ayaa u sheegay Dowladda Mareykanka in ay doonayaan in ay xiraan Xerada Dhadhaab ee Gobolka ay Soomaalida leedahay ee ay Kenya maamusho,islamarkaana hakad geliyaan 6,000 oo Qof oo Bil waliba gali jiray Kenya.
Dowladda Mareykanka ayaa si cad Kenya ugu sheegtay in aysan taageereyn qorshe u gaar ah Kenya oo maamul taabacsan ay u ga dhiseyso Koofurta Soomaaliya,kadibna ay Ciidankeeda galayaan Soomaaliya si ay ula dagaallamaan Al-shabaab,Dekadda Kismaayana u noqoto mid ay maamulkeeda kaalin ku yeelato.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/kenya.png 174 290 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-16 10:21:432016-10-16 10:21:43Wikileaks oo Fashiliyey Qorshe Halis ah oo Kenya ka damacsaneyd Soomaaliya
Weerar mar kale lagu qaaday Markab dagaal oo laga leeyahay Maraykanka Shinuhuu Ma Qabsan Doonaan Dalalka Intooda kale